Manchester City oo kula tartameysa Real Madrid saxiixa Ryan Gravenberch. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Manchester City oo kula tartameysa Real Madrid saxiixa Ryan Gravenberch.
Manchester City oo kula tartameysa Real Madrid saxiixa Ryan Gravenberch.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay kula dagaalanto Real Madrid saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
19 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Holland intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22 isaga oo dhaliyay hal gool sidoo kale caawiye ka noqday 4 gool 28 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa galay 18-kii bilood ee ugu dambeeyay qandaraaskiisa Amsterdam, inkastoo, ay jirtay hadal heyn ballaaran oo ku saabsan mustaqbalkiisa bilihii ugu dambeeyay.
Real Madrid ayaa la sheegay inay u aragto xiddiga reer Holland bartilmaameedka mudnaanta leh ka hor ololaha 2022-23.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Mundo Deportivo , waxaa sidoo kale jira xiiso weyn oo ka imaanaya Man City, iyadoo kooxda heysata horyaalka Premier League ay si adag u u gaarsato saxiixiisa xagaagan.
Barcelona iyo Borussia Dortmund ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay doonayaan inay wadahadal la yeeshaan da’yarka, iyadoo Ajax ay rajeyneyso inay lumiso adeegiisa inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Gravenberch ayaa dhaliyay 10 gool 11 kalena caawiye ka noqday 89 kulan oo uu u saftay kooxdiisa Holland halka uu 10 kulan u saftay xulkiisa qaranka.
Maamulka kooxda PSG oo ka hadlay Wararka ku aadan Heshiiska Lion Messi ee Inter Miami
Liverpool iyo Elijah Dixon-Bonner oo gaaray heshiis ay ku kala tagayaan
Liiska Xiddigaha Liverpool Ee Kulanka Caawa Oo La Shaaciyey
90 daqiiqadood ayay Liverpool u jirtaa inay iska xaadiriso finalkii saddexaad ee Champions League ah muddo shan sannadood gudahood ah, waxaana ka xigta...
Deni oo la saaray cadaadis xooggan oo ku saabsan doorashada golaha...
Isreal oo markii u horaysay taariikhdeeda xil sare u magacowday nin...
Guudlaawe oo mar kale go’aankiisa u caddeeyey musharaxiinta kuraasta ku harsan...
Shaxda Rasmiga: Aston Villa Vs Manchester United ee Horyaalka Premier League-ga,...
Pep Guardiola Oo Farriin u Diray Xiddigaha kooxdiisa kaddib kulankii...
Kulamada Muhiimka uu Maqnaanayo Granit Xhaka oo la Shaaciyay